'Ingozi!': 10 yeeNyanga eziMnandi kakhulu
Izimpendulo eziMnandi, Iifoto ezigqityiweyo kunye nabaQhathelana nabo
" Ingozi! " Yashaya i-airwaves kwifom yangoku ekhoyo ngo-1984. Kunzima ukukhetha ixesha eli-10 elikhunjulwayo ukususela kwimiboniso eninzi. Ukusuka kumncintiswana odlwengayo kwi-Alex Trebek yokuhlambalaza, ukuqhaqhaqhayisa nokugqitywa kweembononongo, "Uyiyo!" Unikeze umdlalo oononophelo kunye neentambo zokubetha izipikili kwiminyaka. Qinisekisa ezinye zeempawu zeemidlalo ezibonisa ukuhleka okanye ezimbini.
UKen Jennings: 'Iyintoni iHoe?' (2004)
Umqhubi uKenn Jennings uxhathisa ngokumelene noWatson. Ben Hider / Getty Izithombe
U-Ken Jennings ungumdlali ochasene kakhulu ne " Ingozi!, " Ekuphumeleleni imidlalo engu-74 kunye needola ezigidi ezingama-2. Wayenomdla kakhulu ekuboniseni ukuba unokufumana uluhlu lwakhe lwexesha eli-10. Kwimeko enje, le nxalenye yayiyi "Ithuba lexesha" kwaye umbuzo wawuthi, "Eli thuba kwisixhobo sokudibanisa ixesha elide singasichaza nokufuna ukuziphatha okubi." UJennings uthengiswa kwaye waphendula wathi, "Yintoni ihoe?" U-Trebek uthi, "Ngaba ngaba oko bakufundisayo esikolweni e-Utah?" Impendulo echanekileyo yayiyiyo, ewe, "Yintoni i-rake?"
UTerbel uthi 'uKebert Xela,' Uhlala kule Nqanaba (2007)
Kwisiqhelo " soLuntu lweNtsapho ," u-Adam West usekho "engozini!" kwaye uthumele u-Trebek kwisilinganiselo sesihlanu ngokuthi igama lakhe libuyele. Kwimidlalo yangempela, ngowama-2007, i-Jared Cohen yayiphindele kwisigqibo sokugqibela kunye ne-$ 1 kuphela. Ukwazi ukuba akanakuwunqoba umdlalo, waphendula wathi, "Yintoni uKebert Xela?" U-Trebek waqaphela igama lakhe ngasemva, okwabangela ukutshintshisana:
Cohen: Ndivile ukuba kukubuyisela kwenye indawo.
Trebek: Undithumela apho?
Cohen: Kwinye inqanaba.
Trebek: Kwesinye isilinganiselo. Ewe, ndiza kubuya kwenye into emva nje kokuba sijongane nabanye abadlali.
Umqhubi u-Alex Hovan unqobile umdlalo, kwaye uTbekbek wavala umboniso ngokuthi, "UAlex uza kuphumla ngeveki xa ndihamba ukuya kwenye into."
I-Way-Way Tie (2007)
Abadlali abathathu abagqityiweyo baqukumbele beboshwe nge-$ 16,000 kwi-'Yopardy! '. Ngokuzithobayo Sony Pictures
Kwada kwale ngongoma, kwakungakaze kubekho intambo emithathu engabandakanyi amanqaku e-zero ekupheleni kweNgcali yokugqibela. Kodwa ngo-Matshi 16, 2007, iqela lokubuyela elizayo uScott Weiss lalingqinela ukubopha amanqaku ukuba ngaba bathathisana naye bobabini bathathele imali yabo kwaye baphetha ngokuphendula ngokuchanekileyo ngexesha lokugqibela lokuxhatshazwa, okwenzayo. Bonke abathathu abaphengululi bagqiba nge-16,000 zama-dollar, kwaye bonke abathathu babuyela kwimiboniso ezayo, eyaphumelela nguJamey Kirby.
I-Tournament ye-Champions, umdlalo wokugqibela (1998)
Njengoko inhlanhla ingaba nayo, ababini abasemagqabini kule nqaku yokugqibela ye-TOC ka-1998 babeyi-humorists. UBob Harris wayengumdlali wezobupolitika, ngoxa uKim Worth wayengumdlali ohlaselayo. Umncintiswano wesithathu, uDan Melia, wayenekhokelo elilawulayo kulo mdlalo. UHarris waqala umdlalo ngokungenawo amanqaku, umphumo wokulahlekelwa yiyo yonke imini ngaphambi kweNgcaciso Yokugqibela. U-Trebek wamnika inkulumo yentetho, kwaye uHarris wathi, "Andiyidingi inceba yakho!" Umngcipheko waqhubeka, kunye noTebek ujoyina, kulo mdlalo. UMelia uzuze umdlalo ngokukhawuleza, ngoxa iHarris yaphela i-$ 1 kuphela. Kodwa lo mqhudelwano wawukhunjulwa kuba bobabini uHarris no-Worth bafika kumdlalo wokugqibela ozimisele ukuba nexesha elifanelekileyo, nokuba babeyazi ukuba abanakuphumelela.
U-Alex Trebek Uhambisa i-Mustache yakhe (2004 no-2014)
U-Alex Trebek, umninimzi we-'Yeopardy! ' ukususela ngo-1984
Awuyi kucinga ukuba utshintsho oluthile lwezityalo luya kubangela ukuqhuma, kodwa ngo-2004, xa u-Trebek egawula isacheta yakhe, abalandeli bangena kwi-tizzy. Ngo-2007, u-Trebek wayegqoke i-mustache ye-fake yesigxina sesibini se-Day Fool's Day show, eyathumela abalandeli ukuba bafumane ukuba ngaba yinyani okanye ayikho.
Ngo-2014, amadevu ka-Trebek abuyela emva kweeveki ezimbalwa, ebangela ukuphendulwa kwefuthe elinamandla. Ababukeli bavotela kwi-Twitter malunga nokuba kufuneka bahlale okanye bahambe. NgoNovemba, ke, u-Trebek wabuye wabonisa ukucoceka.
UKen Jennings Udlala Umdlalo onguNombolo 75 ukuya kuNancy Zerg (2004)
Abo baqhubeka bebukela iveki nganye njengoko uKenn Jennings eqhubeka ephumelela umdlalo emva komdlalo wazibuza ukuba zonke ziphela njani. Ngaba uJennings wayeya kuphuma ebusweni bobuqaqawuli, ebethwa ngamawaka eedola? Ngaba wayeza kuba nokuzithemba kwaye agqume kakhulu? Njengoko kwenzekile, kwafika kumbuzo abaninzi ababenako ukuwufumanisa kodwa baqhekeza "ingozi!" iqela. Umbuzo wawuthi, "Abaninzi balabasebenzi abangama-70,000 bee-white collar-collar basebenze kuphela iinyanga ezine kuphela ngonyaka." UJennings wayekhokelela ekugqibeleni kodwa waphendula wathi, "Yintoni i-FedEx?" Impendulo echanekileyo yayinguH & R Block, ophikisayo uNancy Zerg waphendula ngokuchanekileyo. U-Zerg wager wanele ukubetha uJennings, ekugqibeleni ugijime njengowona mkhulu "Wengozi!" kumncintiswano nanini.
UBrad Rutter Uwubamba uMqhubi oPhambili weeMidlalo (2005)
UBrad Rutter ufumana isheke sakhe sesigidi sezigidi ukuze athole 'Iingozi!' Ultimate Tournament of Champions, ephakanyiswe nguKenn Jennings noAlex Trebek. Sony Pictures
"Ingozi!" I-Ultimate Tournament yeeNqununu yayisisigqibo esikhulu esaletha kwiingqungquthela ezili-150 ezidluleyo kwaye zadlulela kwiiveki ezili-15. UJennings wayedlula ngokuzenzekelayo ukuya ekugqibeleni ngokusekelwe kwi-record setting setting, apho wayejongene noBrad Rutter noJerome Vered. U-Rutter wayedla ngokuphindaphindileyo emihlanu "Yingozi!" imidlalo, i-Tournament ye-Champions kunye ne-Special Million Dollar Masters Tournament. Iimpumelelo zakhe kwi "Ingozi!" i-$ 3,255,102 epheleleyo, kuquka i-$ 2 yezigidi ezifunyenwe njenge-Ultimate Tournament ye-Champions.
Umqhubi weBen Wiles Uthabatha indlela yeCopcatcat (2004)
Omnye uvela kwiJennings. UJennings unqobe imidlalo engama-63 ngeli nqaku, kwaye ngexesha lokugqibela leNtshontsho, u-Ben Wiles umchasi wayengenayo inkcazelo ukuba yintoni impendulo echanekileyo. Esikhundleni sokuba athabathe intlanzi ebumnyameni kwimpendulo, wabhala wathi, "Yintoni ebonayo kwinqanaba elilandelayo," ngotolo olubhekiselele kuJennings. Ukwenza oku kuqhutywe kwinto yokubhokoxa yinto yokuba utolo luphelile lukhomba kwi-third-party u-Lisa Ellis xa eboniswa kwisikrini esibhakabhaka, kwaye uEllis wayenempendulo echanekileyo ... ngoxa uJennings akazange.
I-Pat Sajak Iingcambu zeeHlabathi! (1997)
U-Alex Trebek kunye nePat Sajak kwisethi 'Yeopardy !,' emva kokuguqula indima ekhethekileyo ka-April Fool's Day. Ngokuzithobayo Sony Pictures
Ngomhla ka-Ephreli Fool ka-1997, uPat Sajak noTrbek batshintsha imiboniso yaloo mini. U-Sajak wayezibambelele "kwiHoopardy!" kwaye babonakala benomdla kakhulu kunye nayo. U-Trebek wayekuhle kakhulu kwi "Wheel Fortune," kodwa kwakunokumnceda ukumbona "Kwingozi!" kwisiqendu esilandelayo.
Trebek Ithatha Isiteji Ngaphandle Kwingqumbo (2005)
Lo mzuzwana awuzange uboniswe emoyeni, kodwa wawubandakanyiwe "okwangaphakathi". I-DVD kunye nevidyo kliphu iyafumaneka kwi-YouTube. Ngaphambi komdlalo wokugqibela we-Ultimate Tournament ye-Champions, u-Trebek weza kwisiteji egqoke isambatho sakhe esiqhelekileyo, kodwa ngaphandle kwee-trousers. Uthe ukuba ukunciphisa ukuxhatshazwa komdlalo, abaphangi babecelwe ukuba bonke badlale ngaphandle kweembatho, baze babuze ukuba ikhamera ihamba emva kwee-podium ukuze kuqinisekiswe ukuba abaphangi bavumelana. Ewe, uRutter, uJennings, noVered babembethe iingubo zabo, bebangela ukuba iTetbek iguquke ngokukhawuleza ize iphume. Kwakukho ukuhleka kokuhleka kwabadlali kunye nabaphulaphuli abaphilileyo.
I-Bonus Moment: Imfazwe yeeMinyaka
Ingozi! Productions, Inc.
" Imfazwe yeeNtshontsho yeeMinyaka yayingumqhubi omnandi owabuyisela abaphangi kumanqaku angama-30 okuqala kwintengiso (kwindlela ebekhoyo ngayo). Kwakunzima ukufumana abadlali ababenokubonile kwiminyaka baze babukele bonke baphinde baphinde badlale. Ekugqibeleni, abagqityiweyo babe nguJennings, Rutter noRoger Craig, kunye nomqhubi ophezulu uWutter - owaza kungenakudabuka kumntu.
Imfazwe Yehlabathi II: Umsebenzi wePasorius
Isishwankathelo esifutshane seMpi yamaPersi
Ngaba Kukulungele ukusebenzisa iPaint Painting for Art?